मनोरन्जन – Page 79 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:३४ English
जवानीमा प्रस्ताव त आइहाल्छ: रिया श्रेष्ठ १७ जेष्ठ २०६९, बुधबार १८:३७
सेक्स पचाउँदै समाज ! १६ जेष्ठ २०६९, मंगलवार १९:१४
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सिनेमामा कामुकताको पारो बढ्दै जानुलाई नेपाली समाज यौनको मामलामा उदार र खुला बन्दै गएको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यतामा आएको परिवर्तनको संकेत फिल्ममा देखिएको उनीहरुको बुझाइ छ । हुन पनि फिल्ममा ग्ल्यामरस सिन अहिले सामान्य..
रेखाको डिभोर्स हल्ला मात्रै १३ जेष्ठ २०६९, शनिबार १८:४४
काठमाडौं । नायिका रेखा थापा र फिल्म निर्माता छवि ओझाले डिभोर्स गरेको हल्ला एक्कासी चलेपनि यो झूटो भएको दुवैले बताएका छन् । छविले फिल्म नेपालसँग कुरा गर्दै रेखासँग आफ्नो लामो समयपछि ९ जेठमा भेट मात्रै भएको बताए । 'खै डिभोर्सबारे त मलाई थाहा छैन,' उनले भने । हामिले सम्पर्क गर्दा रेखा र..
सेक्स पचाउँदै समाज १३ जेष्ठ २०६९, शनिबार १८:४१
यौन ओइलाएर झर्ने एक अत्यन्त सुन्दर फूल हो – रमेश बुढाथोकी १० जेष्ठ २०६९, बुधबार १९:१९
राजन घिमिरे, काठमाडौ । लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको कुशल कलाकर्मी हुनुहुन्छ रमेश बुढाथोकी। उहाँले रंगमञ्चबाट कलायात्रा सुरु गर्नुभएको हो भने टेलिफिल्म हुँदै ठूलो पर्दाको चलचित्रहरूमा पनि उहाँले आफ्नो कौशलता प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। विशेष गरेर अभिनय..
‘सेक्सी नायिका’ जे गर्न पनि तयार १० जेष्ठ २०६९, बुधबार १९:१८
राजन घिमिरे, काठमाडौ । सिनेमाको पर्दामा अनुहार देखाउन पाइन्छ भने पर्दामा जसरी पनि प्रस्तुत हुन पछि नहट्ने सविना कार्की यतिबेला आफ्नो चर्चा भएकोमा निकै दङ्ग छिन् । तर, आफ्नो चर्चा नकारात्मक भएको र आफूलाई हेर्ने सोच गलत हुन थालेकोमा भने उनलाई चिन्ता छैन । उनी आजभोलि भन्न थालेकी छिन्,..
किम पछाडीबाट संसारकै सबैभन्दा सेक्सी ४ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ११:५६
विश्व सुन्दरी, ब्रम्हाण्ड सुन्दरी, नितम्ब सुन्दरीका बारेमा त सबैले थाहाँ पाएकै हो । सुन्दर कर्मी फिगर अर्थात सुन्दर अनुहार, सुडौल छाती, बारुले कम्मरका आधारमा हलिउड हिरोईन मोडल गायिकालाई र्याङकिङ गर्ने प्रचलन पनि पुरानै हो । पछिल्लो समय अगाडिबाट मात्र नभएर पछाबडी अर्थात ढाडतिरबाट..
गोही मानव बनिन रिहाना ४ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ११:५३
आर एण्ड वी सिंगर रिहानालाई नयाँ गितको भिडियोमा नौलो गेटअफ देखिन पाईनेछ । ह्वेर ह्याभ यू विन सिंगलकालागी उनले भर्खरैमात्र भिडियो सुट सिध्याएकी छिन । भिडियोमा दुबै बक्ष र ढाडमा गोहीको शरिर जस्तै मेकअप गरी हिलो र पानीबाट गोही बाहिर निस्केजस्तै उनी निस्कदै गरेको दृश्य रहेको छ ।..
लेडी गागाको इंडोनेशियाको शो स्थगित ३ जेष्ठ २०६९, बुधबार १२:३१
ईस्लामिक संगठनको विरोधको कारण स्थानीय प्रहरीले पप गायिका लेडी गागाको ईण्डोनेशियामा हुने तय भएको कन्सर्ट स्थगित भएको छ । ईस्लामिक संगठनहरुले गागाको कारण मुस्लिम संस्कृतिमा खतरा हुने दावी गरेका छन । विरोधीहरुले भने छन कि उनीहरुलाई लेडी गागाको उत्तेजक बेशभुषा र हाउभाउ गैर ईस्लामिक..
सायद हेरेपछी संयमसँग केकीको फेसबुक गफ १ जेष्ठ २०६९, सोमबार २०:०६
काठमाण्डौ । सायद हेरिसकेपछी हिरोईन केकी अधिकारीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखिईदिईन 'ग्रेट वर्क बाई संयम पुरी... लभ्ड सायद.. डन्ट मिस ईट ।' त्यसपछि उनको स्टाटसमा कमेन्टको बर्षा हुन थाल्यो । जहाँ छोटे हिरो संयमले केकीलाई थ्याङ्क्स पनि दिन भ्याए । सो स्टाटसमा केकीका फ्रेण्डहरूले कमेन्ट..
चुम्बनभन्दा सेक्स प्यारो–जिया केसी, नायिका १ जेष्ठ २०६९, सोमबार १९:५८
यतिबेला सिनेबजार नायिका जिया केसीको चर्चाले निकै तातेको छ। अहिलेसम्म जिया अभिनीत एउटा चलचित्र पनि प्रदर्शन भएको छैन तर उनको चर्चा चुलिएकै छ। यसरी चलचित्र प्रदर्शन नहुँदै उनको चर्चा हुनुकै एउटै कारण छ, यी सेक्सी ठिटीले 145एटीएम146 भन्ने चलचित्रमा निकै लामो र कामुक टङ किस दिइन। उनकै..
“अश्लीलता” रोक्ने बोर्डको तयारी १ जेष्ठ २०६९, सोमबार १७:५४
काठमाडौं : चलचित्र लुट र चपली हाइटको सफलतासँगै नेपालमा ‘अश्लील’ चलचित्रको निर्माणक्रम ह्वात्तै बढेकामा नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड यसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायमा पुगेको छ । पछिल्लोचोटि दर्जनौं चलचित्र भरमार यौनदृश्य र छाडा संवादमा केन्द्रित हुँदै निर्माण हुन थालेपछि बोर्ड चनाखो..
विद्या डेटिङमा १ जेष्ठ २०६९, सोमबार १७:५२
मुम्बई : बलिउड अभिनेत्री विद्या बालनले आफू सिद्धार्थ राय कपुरसँग प्रेममा रहेको स्विकारेकी छन् । यसअघि टिभी मोसन पिक्चर्सका प्रमुख सिद्धार्थसँग प्रेमको हल्ला चले पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । अहिले डेटिङमा व्यस्त रहेको यो जोडी तत्काल विवाह गर्ने योजनामा भने नरहेको उनले..
लास्ट किसमा खोलिन् कतारमा ढाकिन् २७ बैशाख २०६९, बुधबार १९:१७
शैलेन्द्र कठायत, दोहा, नायिका सोभिता सिंखडा बदलिंदो समय अनुसार आफूलाई पनि बदल्ने गरेकी छिन् । कहिले आफ्नो शरिरलाई हद भन्दा बढि देखाउँछिन् त कहिले केहि पनि नदेखिने गरेर ढाक्छिन् । पछिल्लो दिनमा पनि यस्तै देखिएको छ । प्रदर्शनको क्रममा रहेको फिल्म 'द लास्ट किस' मा मज्जाले खुलेकी सोभिता..
‘चपली हाइट’की हट गर्ल अब साधारण केटी २७ बैशाख २०६९, बुधबार १९:१०
काठमाडौं । 'हट सीन' दिएर चर्चामा आएकी नायिका बिनिता बराललाई अब आउने सिनेमामा भने साधारण युवतीको रुपमा देख्न पाइने छ । कमलकृष्ण निर्देशित चलचित्र 'फुलस्टप'मा बिनिता 'चपली हाइट'की पात्रको विपरित देखिने उनले बताइन् । 'छोटा लुगा होइन म कुर्ता सुरुवाल लगाउने सामान्य केटीमा देखिनेछु,' २५..
राजन घिमिरे, काठमाडौ, बैशाख २७ । अब नेपाली सिनेमाका कलाकारहरू पनि ग्ल्यामर्स र यौन क्रियाकलापका दृश्य दिने मामिलामा खुला रूपले अगाडि आउन थालेका छन्। यो कुरामा युवापुस्तामा नवप्रवेशी युवतीको बोलवाला भने बढी चल्न थालेको छ। नायक–नायिका अङ्गालो मारेको र माया दर्शाउन चुम्बन खाएको..